हिन्दू धर्मशास्त्र अनसार ननुहाइकन खाना खानु हुँदैन भन्ने मात्र होइन यसको वैज्ञानिक कारण पनि छ - ज्ञानविज्ञान
हिन्दू धर्मशास्त्रमा स्नान नगरिकन भोजन गर्नु हुँदैन भनिएको छ । शास्त्रमा लेखिएको छ : अस्नायी समलं भुंक्ते अर्थात् ननुहाई भोजन गर्ने मानिसले मल खाए बराबर हुन्छ ।
आजकल पश्चिमको अनुकरण गरेर मानिसहरू यी कुरालाई ध्यान दिँदैनन् तर यसका पछाडि वैज्ञानिक कारण विद्यमान छन् ।
नुहाएपछि हाम्रो शरीरमा पाचनरस उत्तेजित हुन्छ जसले भोजन पचाउन मद्दत गर्छ जबकि नुहाउनुअघि खाना खाँदा शरीरले भोजन पचाउन अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्छ ।
नुहाउनुअघि झोल पदार्थ मात्र खाएको राम्रो तर ठोस भोजन चाहिँ नुहाएपछि नै खानुपर्छ ।
नुहाउँदा शरीरको मल सफा हुन्छ । अनि मञ्जन गर्दा दाँतको फोहर पनि निस्कन्छ । नुहाएपछि शरीर ताजा हुन्छ र स्फुर्ति आउँछ अनि भोक जाग्छ र खाना मजाले पच्छ ।
नाइटोमा नरिवलको तेल लगाउदा के के फाइदा हुन्छ ?
१. पेटका मांसपेशी र मासिक धर्ममा आराम
नरिवलको तेलमा एन्टि अक्सिडेन्ट गुण हुने भएकाले पेटको मांसपेशीहरुको तन्काईको कारणले उत्पन्न हुने दुखाईमा आराम दिन्छ ।
२. आँखाका लागि लाभकारी
नरिवलको तेलको प्रयोगले तपाईंको दृष्टि अत्यन्त राम्रो हुन्छ ।
३. प्रजनन क्षमता बढ्छ
लामो समयदेखि विश्वास गरिदै आएको छ कि नरिवलको तेलले फर्टिलिटी रेट बढाउन सहयोग गर्छ । किनकी यसमा ट्राइग्लिसराइड पाइन्छ ।
४. उर्जा बढाउँछ
नरिवलको तेलले खेलाडीहरुलाई उर्जा दिने र उनीहरुको शारीरिक स्थिति सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ । यसका अलावा रुघाको ज्वरोबाट पनि बचाउँछ ।
यो किन लाभकारी छ ?
नाइटो यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट बच्चाले अम्बलिकल कर्डद्वारा आफ्नो पोषण लिन्छन् । यस ठाउँबाट कैयौ नशाहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले नाइटोमा तेल लगाउदा आन्तरिक अंगका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
सबैभन्दा अगाडि कपास लिने । कपासलाई नरिवलको तेलमा डुबाउने, त्यसपछि यसलाई आफ्नो नाइटोमा केही बेरका लागि राख्ने गरौं । १५ मिनेटसम्म त्यहाँ मसाज गर्नुपर्छ ।
याे जानकारी पनि,
प्राय मानिसले पटक पटक खाना खाएपनि छिनछिनमा भोक लागिरहेको हुन्छ । हामिले पेटको भोक निको पार्नलाई हलुका भोजन खानु पर्ने हुन्छ । तर पनि हामिलाई त्यो भोजन खाएको आधा घन्टामा फेरि पनि भाेक लागेको हुन्छ । त्यसो त भोक लाग्नु शरीरलाई राम्रो हो । आवश्यक भन्दा वढी भोक लाग्नु कुनै रोगको कारण पनि हुन सक्छ ।
खानामा प्रोटिन र फइबरको ,कमि भयो भने प्रतेक व्यक्तिको पेट खालि र जतिखेर पनि भोक लागे जस्तो हुन्छ । तसर्थ यि प्रोटिनय्क्त खाने कुरा खादा पेट भरिएजस्तो अनुभव हुन्छ । कम व्यालोरिको कमिले गर्दा छिटो भोक लाग्छ । यसले शरीरलाई काम गर्नका लागि सम्पूर्ण आहारा दिन्छ । त्यसैले भरपुर्ण खानेकुरा खानुपर्दछ र प्रत्येक व्यक्ति थोरैमा पनि कम्तिमा आठ घण्टा सुत्नुपर्न हुन्छ ।
यकारण पुरा निद्रा लिदा पेट ठिक हुने भोक नलाग्ने समस्या बाट बच्न सकिन्छ । अधिकाँश मानिस बिहानको खाना खादैनन यसले गर्दा समस्या आउँछ र जतिखेर पनि भोक लागेजस्तो हुन्छ । केहि मानिसहरु छिटो छिटो खाना खान्छन नचपाईकन खाँदा खानेकुरा पच्दैन अनि पेटसम्बन्धी समस्या आइलाग्छ । त्यसैले खानेकुरा जहिलेपनि चपाएर खानुस् । खाना जति राम्ररी पच्छ, त्यति कम भोक लाग्छ ।
कृतिले मौसम अनुसार विभिन्न अन्न-उत्पादन दिएको छ । जाडो वा गर्मी उत्पादन हुने अन्न, फलफूल, सागसब्जीले हामीलाई त्यही मौसममा हुनसक्ने संभावित समस्याबाट बचाउँछ । बाषिर्क चक्र अनुसार नै विभिन्न फल, अन्न, सागसब्जी उत्पादन हुन्छ । यसरी मौसमी रुपमा प्राकृतिक रुपले उत्पादन भएका खानेकुराले शरीरमा आवश्यक पोषक तत्व प्रदान गर्छ ।
Don't Miss it कालो अंगुर खाँदाका फाईदाहरु थाहा पाउनुहोस्
Up Next दाद, जण्डिस देखि लिएर अन्य थुप्रै राेगहरु चट पार्ने हर्रोका औषधीय गुणहरु यस्ता छन्
मधुमेह किन हुन्छ ? भनेर कसैले सोधे, कुनै पनि विज्ञसँग यसको एउटा मात्र जवाफ छैन किनभने निकै धेरै कारणहरुे गर्दा…